10000/-K ငွေဖြည့်ပီသား ငွေဖြည့်ကဒ်(3)ကဒ်ရှိရုံနဲ့ 10000/-K free ယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်း | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
*Donate ( လှူဒါန်းရန် )
» 10000/-K ငွေဖြည့်ပီသား ငွေဖြည့်ကဒ်(3)ကဒ်ရှိရုံနဲ့ 10000/-K free ယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
10000/-K ငွေဖြည့်ပီသား ငွေဖြည့်ကဒ်(3)ကဒ်ရှိရုံနဲ့ 10000/-K free ယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
ဒီပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပီ မေးမြန်းခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းသီးခံပေးပါခင်ဗျာ.....အနော်သိထားတဲ့ နည်းပညာကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်.......(ဒီဟာက ခိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး ငွေဖြည့်သော အခါ 10000 များပါသောငွေများ ရှိကြပါတယ်....ဘယ်သူ့ရဲ့ ငွေများလဲ မပါသွားပါဘူး.....ဥပမာ-2GB sd card ကို 4GB sd card လုပ်နည်းနဲ့တူတယ်။ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုတည်းကို ငွေဖြည့်ပီသား [10000/-Kyats] ကဒ် (3)ကဒ်ရှိရပါမယ်.....တစ်သောင်းတန်ငွေဖြည့်ကဒ် ငွေဖြည့်ပီရင် မပစ်ပါနဲ့....ငွေဖြည့်ပီသား (3)ကဒ်ရရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ လုပ်လို့ရပါပီဗျ.....ဥပမာ- 09x-xxxx-xxxx ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထဲပဲ ငွေဖြည့်ပြီးထားသော ကဒ်(3)ကဒ်နဲ့သာ လုပ်နိုင်မှာပါ။)ဥပမာ - ပထမ ငွေဖြည့်သွင်းပီသား (1)ကဒ်695-268-5-7232-8-592-982 [၁ ကဒ်]ရှေ့ + လယ် + နောက် နံပါတ် (3)ခုကိုယူပီပေါင်းပါမယ်.....695 + 7232 + 982 = 8909ရှေ့က (3)လုံးနဲ့ နောက်က (3)လုံးကိုယူပါမယ်....695-982ဒုတိယ ငွေဖြည့်သွင်းပီသား (1)ကဒ်697-268-1-7942-7-599-287 [၁ ကဒ်]ရှေ့ + လယ် + နောက် နံပါတ် (3)ခုကိုယူပီပေါင်းပါမယ်.....697 + 7942 + 287 = 8926ရှေ့က (3)လုံးနဲ့ နောက်က (3)လုံးကိုယူပါမယ်....697-287တတိယ ငွေဖြည့်သွင်းပီသား (1)ကဒ်542-585-7-8576-4-242-648 [၁ ကဒ်]ရှေ့ + လယ် + နောက် နံပါတ် (3)ခုကိုယူပီပေါင်းပါမယ်.....542 + 8576 + 648 = 9766ရှေ့က (3)လုံးနဲ့ နောက်က (3)လုံးကိုယူပါမယ်....542-648ပေါင်းလို့ရတဲ့ နံပါတ် (4)လုံးကို ချရေးပါမယ်.....8909-8926-9766- နံပါတ် (12)လုံးပါ....**** (နံပါတ် 11 or 13 လုံး)ဖြစ်ခဲ့ရင်မရနိုင်ပါဗျ..... ****ဒါဆိုရင် ဂဏန်းတွေကိုတွဲလိုက်ရအောင်ဗျ.....ငွေဖြည့်ကဒ်နံပါတ်မှ ရှေ့က (3)လုံးနဲ့ နောက်က (3)လုံးကိုယူထားလေးတွေချရေးလိုက်ပါ......695-982697-287542-648ပေါင်းလို့ရတဲ့ နံပါတ် (12)လုံးကိုချရေးမယ်....8909-8926-9766-ငွေဖြည့်ကဒ်နံပါတ်မှ ရှေ့က (3)လုံးနဲ့ နောက်က (3)လုံး (6)လုံးတွဲနဲ့ ....ရှေ့ + လယ် + နောက် နံပါတ် (3)ခုတွဲ ပေါင်းလို့ရတဲ့ နံပါတ် (12)လုံးရဲ့ အရှေ့နဲ့ အနောက်မှာထားပီ တွဲပါမယ်.....8909-8926-9766-695-9828909-8926-9766-697-2878909-8926-9766-542-648695-982-8909-8926-9766697-287-8909-8926-9766542-648-8909-8926-9766အပေါ်ကအတိုင်း ကဒ် ၆ကဒ်၏ နံပါတ်ရပါမယ်ဗျ.....၆ကဒ်တွင် တစ်ကဒ်သာ 10000 တန်ကဒ် ငွေဖြည့်သွင်းလို့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်....[ရနိုင်မရနိုင်ကတော့ မသေချာပါ.....]1st Credit: MYAWADDY2nd Credit: ဆေးရိုးသည်
3nd Credi : ZawMyoOo (MM-Mpx team)ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ရေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲ (5000/- သုံးကဒ်နဲ့) စမ်းသပ်နေဆဲပါဗျ......တစ်ရက်ကို နံပါတ် (2)ခုဖြည့်ကြည့်ပေါ့....(2)ခုစလုံး Card is invilid ပဲပြပါတယ်....(3)ခါတော့မစမ်းရဲလို့ နောက်နေ့မှပဲစမ်းတော့မယ်ဗျ.....လိုင်းအပိတ်ခံရမှာစိုးလို့ပါဗျ......
အနော် အထက်မှာ Credit3ခုတောင် ပေးထားတယ်.. ဒီပို့စ်ကို ကူးမယ်ဆိုရင် Credit ထဲမှာ မောင်ပေါက်ကိုလည်းမြင်ချင်တယ်.. ဟီးး
: 10000/-K ငွေဖြည့်ပီသား ငွေဖြည့်ကဒ်(3)ကဒ်ရှိရုံနဲ့ 10000/-K free ယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
: ဒီပို့စ်နဲ့ပတ်သက်ပီ မေးမြန်းခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်းသီးခံပေးပါခင်ဗျာ..... အနော်သိထားတဲ့ နည်းပညာကိုပြန်လ...
အလုပ်လုပ်မယ်မထင်ပါ။ Phone error တက်ခြင်းသာ အဖတ်တင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုမောင်ပေါက်ရေ။ :D
နံပါတ်‌ ၆ ခု ရတယ်‌ အဲ့ထဲက ၂ ခုေ‌လောက်‌ က အမှန်‌ တကယ်‌ ၁၀၀၀၀ ကဒ်‌ ‌တွေ
FunAmaze ဟာသ နှင့် အံ့သြစရာများ
စွန့်စားခန်းအလွဲဟာသများ အပိုင်း (၈)
- *Download This Video : 63.3Mb*
Visit : *www.funamaze.net*
Huawei G730-U00အတွက် မြန်မာစာပါပြီးသား S4 Flash Tool Firmware
*Download Via Mediafire ( ROM Only ) : 334.31 Mb*
*Download Via Mediafire ( ROM + PDF )*
Password - AungMinHan%$*&@!
toolbar maker 1 week ago
Maung Pauk's Fashions
မိုးထက်ဝင့် တဲ့.. အလှလေးပါ
toolbar maker Post in : *www.mpfashions.net*
All Updates Reader ရယူရန်
PDF ကို လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ရမယ့် novaPDF Profess...
သတင်းကောင်း - Huawei ဖုန်းများအတွက် Network Unlock...
Music player အတွက် Zplayer (v 3.9 )
Contacts ကို Manage လုပ်ပေးမဲ့ pixelphone pro v2.9...
အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေအတွက် Hotspot Shield (v 3.13...
ဘိလိယက်ဝါသနာရှင်တွေအတွက် Pool Break Pro 2.3 Apk
Hard disk ထဲက file တွေကို နေရာတကျပြန်စီပေးမဲ့ Def...
Temple Run - Brave v1.5 For Android(35MB)
Nokia N8 နဲ့ Belle smartphone တွေအတွက် Maze Lock P...
အသစ်ထုတ် Boat Browser
IMEID နံပတ်နဲ့ Code တောင်းလာသူများအတွက် Unlock Cod...
Huawei Unlock Code များ ကြေငြာခြင်း - 1
Superhero Stickman 2.0.0 .ipa (iPhone 3Gs/iPhone/i...
စက်ရုပ်ဖုန်း ( Android Phone )အားလုံးအတွက် Shortcu...
Android နဲ့ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ စစ်ဆေးဖို့ English Grammer...
Android မှာ ကားပြုပြင်နည်းကြည့်ပြီး ကားပြင်လို့ရမယ...
လူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ မျိုးပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အ...
Just6Weeks v1.8.5 .apk (ပိန်ချင်သူများအတွက် နည်း...
Windows8 style ကြိုက်ကြသူတွေအတွက် Windows 8 Launch...
Application manager porversion III (App2SD card...
နောက်ဆုံးထွက် Next Launcher 3D Apk ( v1.55.1 )
Virus သတ်ရာမှာအစွမ်းထက်တဲ့ Smadav Pro New Version ...
All In ONe Toolkit For HTC Amaze
စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ ၁ကနေ ၉ အထိ
Ubuntu 13.04 Beginner Guide ( မြန်မာလို )
ZawGyiFonts ဖြင့် Virus ကာကွယ်နည်း (မြန်မာလို EBoo...
Photoshop ဖြင့် Animation ပြုလုပ်ခြင်း (Ebook မြန်...
LG လည်း iPhone နဲ့အပြိုင် Color Printer ထုတ်
Adobe InDesign CS6 အသုံးပြုနည်း မြန်မာလိုစာအုပ်
အွန်လိုင်း တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်နိုင်သော ကင်မရာများ ...
Android ဖုန်းထဲက မလိုချင်တဲ့ Google Account ကို Go...
LG Optimus L3-E400 ဖုန်းကို လွယ်လွယ်လေး root ဖောက...
အသစ်ထွက်လာတဲ့ Google Earth Pro 7.1 Full Version ပါ...
Andorid အတွက် Ultimate iOS7 Launcher Theme v3.2 Ap...
PC ပေါ်မှာ OS တွေ အများကြီးတင်သုံးနိုင်တဲ့ VirtualB...
Asphalt7: Heat v1.1.1 + Data File For Android
Cut The Rope HD v2.3.2 For Android
GO SMS Pro 5.22 For Android
iNex Theme v1.4 Apk အသစ်
Nova PDF Software နဲ့ ဘယ် Document ဖိုင်ကမဆို PDF ...
Android အတွက် မြန်မာ 3D Gallery
Android အတွက် iPhone Screen Locker v1.08 Apk
မြေပုံတွေကို Offline နဲ့ ကြည့်လို့ရမယ့် City Maps ...
Android မှာ တိုင်းတာရေးTools တွေ တော်တော်စုံတဲ့ Sm...
ဖုန်းလေးတစ်ချက်လှုပ်လိုက်ရုံဖြင့် Wallpaper ပြောင်...
HUAWEI Ascend D1 quad XL (U9510E) firmware
RootGenius ခေါ် Root Wizard အသစ် v1.0.9
C8813,C8813D, G510 မှာ Viber အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရအေ...
Phone ကို ပေါ့ပါးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ phone speed ...
Phone contact,call log,photos,SMS,videos တွေကို pa...
ကွန်ပျူတာကနေ ရုပ်သံ Live လွှင့်ပေးတဲ့ Luci Live Bro...
Google Play မရှိလဲ Google Play မှာ App တွေ ဒေါင်းလ...
Network ဖြင့် FILE Sharing လုပ်ခြင်း
သီချင်းရဲ့ စာသားကို အလိုအလျောက်ဖေါ်ပြပေးတဲ့ Minilyr...
PDF တွေထဲက Password တွေကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ဖြုတ်ပစ်မ...
IObit Malware Fighter Pro 2.1.0.18 Full
အခန်းအလှဆင်ချင်သူတွေအတွက် Room Arranger 7.2.7.314 ...
Windows7မှာ Control Panel ကို ဖျောက်မယ်.. ဖေါ်မယ်...
Skype 6.7.0.102 Full Offline Installer
Gtalk တွင် Zawgyi-One ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း (မြန်မာလို...
Kaspersky Antivirus 2014 နှင့် Full Version ဖြစ်အေ...
HTC Firmware တင်ဖို့ သိထားသင့်တာလေးတွေ...
Microsoft Windows 8 - 16 in 1 final build x86/x64 ...
MPT Service v1.0.1 (မြန့်မာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မူ့)
Android ပေါ်မှာလေယာဉ်မောင်းရမယ့် Infinite Flight v...
နောက်ဆုံးပေါ် Android Smart Phone အမျိုးပေါင်း 2000...
USB Flash Drive ထဲက Data တွေ အလိုအလျောက် Backup လု...
Samaung Model များအား GSM Network unlock ပြုလုပ်နည...
ZTE v790 ကို Xperia ROM လေးနဲ့ လန်းရအောင်
ZTE v790 ကို CWM တင်ရအောင်
MICROSOFT OFFICE 2010 ကို Activate ဖြစ်စေမယ့် CMD
Internet Connection ကို2ဆမြှင့်နည်း
Framaroot 1.5.3.apk နဲ့ Phone/Tablet တွေ အများကြီး...
C8813 အတွက် Network Unlock Code တောင်းကြရအောင်..
August လ 10 ရက်နေ့က ထွက်တဲ့ အခပေး Android Apps 65 ...
Whatsapp တွေအတွက် Whatsapp stickers- emotions 1.2
Wallpaper ချစ်သူတွေအတွက်Awesome Land Pro LiveWallp...
Next ရဲ့ အသစ်ထုတ် Next Time Tunnel livewallpaper v...
WarShip သင်္ဘောတိုက်ပွဲ (ipa iphone game)
Pacific Rim 1.5.0 + Data For (Android)
Computer ရဲ့ USB Port တွေကို Lock ချထားပေးမယ့် USB...
ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ Nova Launcher apk (V2.2)
ROM တွေကိုစောင့်ပေးမဲ့ ROM Toolbox Pro v5.9.0 Apk
Microsoft Visio Professional 2013 Full
Android 4.0 ရဲ့ အောက် ဗားရှင်းတွေအတွက် မြန်မာစာထည်...
Next Launcher 3D English version!
Canon IP2770 နှင့် IP2772 ကို Counter Reset လုပ်နည...
မိုးညှင်းသတင်းများဖတ်ရှုနိုင်မည့် Android သုံး Apk ...
Hard Disk ရဲ့ ပျက်စီးမှုကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့ HD...
Okdo Pdf to All Converter Professional 5.0 Full
Android အတွက် Videodownloader for facebook v0.4.2....
ဖုန်းဝင်လာရင် Flash မီးလုံးလေးတဖျက်ဖျက်လင်းစေတဲ့ B...
Folder High light v2.4 + Crack
Tarot ဗေဒင် ဟောနည်း စာအုပ်နှင့် Android အတွက် Taro...
App တွေကို အလွယ်တကူယူသုံးနိုင်အောင် ကူညီပေးမဲ့ Sid...
Windows7& 8 ကို Software မလိုဘဲ USB Drive ဖြင့် ...
၁၅၀၀ တန် GSM မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် အွန်လိုင်းမှတ...
Apex Launcher Pro (2.0.4) Full APK
iPhone အတွက် Cydia Sources များ
File format အမျိုးအစားများ
Facebook မှာ Movie တွေတင်ကြတဲ့အခါ သိထားရမယ့် ဖိုင်...
Phone Model ပေါင်း 3000 ကျော်ကို Root လုပ်ပေးနိုင်...
မြန်မာနိူင်ငံတွင် Voice Mail စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဆ...
နေ့စဉ်အသုံးဝင် Android applications များစုစည်းမှု
KMSpico v8.2 Final Release Complete Edition
TEAMVIEWER PREMIUM 8.0.19617 Full
HUAWEI Ascend G510-0200 Build Number B173 နဲ့ဆုံးတ...
Sonyericsson x8 (e15i) version 2.1 upgrade to Ging...
Android 4.0 နဲ့အထက်ဖုန်းများ အတွက်MMSD Smart Zawgy...
ပန်းရောင် theme လေးနဲ့လန်းကြမဲ့ GO SMS pro (v 1.0 ...
The Free Note News